Global Voices teny Malagasy » Shakib Khan, Mpilalao Sarimihetsika, Torian’ny Mpamily Tuk-Tuk Noho Ny Nampiasàna Ny Laharana Findainy Tao Anaty Sarimihetsika Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Shakib Khan, Mpilalao Sarimihetsika, Torian'ny Mpamily Tuk-Tuk Noho Ny Nampiasàna Ny Laharana Findainy Tao Anaty Sarimihetsika Iray
Voadika ny 12 Novambra 2017 8:57 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Shakib Khan, mpilalao tao anatin'ny sarimihetsika Rajneeti. Pikantsary avy aminà lahatsary fampahafantarana tao amin'ny YouTube.
Notorian'ny  Bangladeshi iray mpamily tuk-tuk ilay mpilalao sarimihetsika Shaib Khan, noho ny fahasimbàna nateraky ny fampiasàna ny laharana findainy tao anaty sarimihetsika malaza iray.
Iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika isan'ny nahita fahombiazana indrindra tamin'ny tantaran'ny sarimihetska tao Bangladeshi i Shakib Khan,  manana mpanohana an-tapitsisa. Nivoaka tamin'ny Jolay ilay sarimihetsika malazany farany indrindra, “Rajneeti ” (Politika). Ao anatin'ilay sarimihetsika, ilay olona nolalaovin'i Shakib Khan dia nanome ny laharana findainy ho an'ilay vehivavy mpilalao sarimihetsika Apu Biswas. Toa fifanandrifian-javatra, laharana nitovy amin'ny an'i Ijajul Miah, mpamily tuk-tuk avy any Habiganj, any avaratra atsinanan'i Bangladesh. Ny tuk-tuk , kodiarantelo mandeha amin'ny solika, na entona natoraly (CNG) na vatoaratra, dia efa endrika mahazatra amin'ny fitaterana an-tanandehibe ao Bangladesh.
An-jatony maro ireo mpankafy tsy nivadi-belirano tamin'i Shakib Khan no nino hoe ilay tao anaty sarimihetsika dia laharana manokana an'ilay olona ankafizin-dy zareo . Gaga i Ijajul naharay antso maro tamin'ny laharany avy amin'ireo mpankafy an'i Shakib izay niezaka ny mba hiresaka tamin'ilay mpilalao sarimihetsika. Tao anatin'ny andro dimy nanomboka ny 10 Jolay 2017, 432 no fitambaran'ireo antso an-telefaona  voarain'i Ijajul. Tena nisy fiantraikany mahatsiravina tokoa tamin'ny asa fitadiavany io satria tsy afaka nahazo azy ny sasany tamin'ireo mpanjifa mpandeha aminy.
Nomen'ilay kintan'ny sarimihetsika ao Bangladesh, Shakib Khan, ho an'ilay sipa tao anatin'ny sarimihetsika iray ny laharan'ny findai”NY”. An-jatony ireo vehivavy mpankafy azy no niantso ilay laharana taorian'izay. Ny olana dia an'olona hafa raha ny marina ilay laharana, mpamily tuk-tuk iray izay noheverin'ilay vadiny vaovao fa manitsaka azy & nandrahona ny hisaraka aminy.
Nisy vehivavy iray mpankafy aza, nandia làlana 500 km mihitsy hankany an-tranon'i Ijajul nanantena ny hihaona amin'i Shakib Khan. Niteraka olana an-tokantrano io ho an'i Ijajul izay vao avy nampaka-bady sy manana zanaka vavikely 17 volana. Nampangain'ny vadiny ho manitsakitsaka tokantrano izy ary norahonany hilaozana.
Nanapaka hevitra i Ijajul ny hitory  an'ilay mpilalao sarimihetsika, Shakib Khan, ny talen'ny Bulbul Biswas ary ilay mpamokatra sarimihetsika, Ashfaq Ahmed, amin'ny nampiasàna ny laharany tao anatin'ilay sarimihetsika, tsy nakàna alàlana tainy akory. Tany am-boalohany dia nisalasala  ihany ny mpitsara tao amin'ny distrika ny hanaiky ily fitoriana ity, saingy nampanao fanadihadiana taorian'ny nametrahana porofo. Vola Bangladeshi Taka 5 tapitrisa ($60,000) no takian'i Ijajul ho toy ny onitra amin'ny fanimbàna naterak'ireo antso an-telefaona sy ny saika faharavàn'ny tokantranony.
Nolazain'ny  mpisolovava an'i Ijajul, fa raha voaporofo ny heloka, ho fanampin'ny onitra, mety hiditra am-ponja mandritry ny telo taona ilay voampanga. Nokilasian'ilay  mpilalao sarimihetsika ho toy ny “mampihomehy” ilay ady eny amin'ny fitsaràna ary nilaza izy fa vonona ny hiatrika ny ady manoloana ny lalàna. Nampian’ ilay mpilalao sarimihetsika fa laharana tsy niasa io fony izy ireo nampiasa azy tao anatin'ilay sarimihetsika.
Haingana be ireo mpankafy an'i Shakib Khan tamin'ny filazàna hoe tsy hadisoan'ilay mpilalao io:
This is not fault ! He just followed director's orders & director is the main reasonable person for this mistake!
Tsy hadisoan'i io #shakibKhan  ! Nanaraka ny baikon'ny tale fotsiny izy & ny tale no tena tomponandraikitra tamin'io hadisoana io!
Tao anaty lahasoratra iray tamin'ny Facebook, Zahid Newaz Khan  nanamarika ny fomba nahatonga ity vaovao ity hahasarika ny sain'izao tontolo izao:
Teo am-pifohazana, gaga aho namaky ny vaovaon'ny BBC. Nilahatra tamin'ireo vaovao mahakasika fanafihana mpampihorohoro tany New York, Donald Trump, ary ny fialàn'ny Sekretera misahana ny Fiarovana tany Angletera ilay vaovao. Tsy zavatra maivaimaivana izany hoe asongadinìny BBC izany (anatin'ireo vaovao mafana rehetra).
Iray hafa koa mpampiasa Facebook, Kawsarul Alam Sanjid , no nametraka fanontaniana vitsivitsy sahaza tsara mihitsy:
Tehafako ny fanapahankevitr'ilay mpamily tuk-tuk hangataka onitra noho io tsy rariny natao azy io.
Maro no nihevitra azy io ho tetiky ny mpamily tuk-tuk iray ‘tsy misy apoaka’ mitady laza sy manararaotra fotsiny ity zavamisy ity. Lazain'izy ireo mihitsy aza fa mety ho nanolo ny laharany ilay mpamily tuk-tuk, tamin'ny fividianana karatra SIM iray hafa tsy misanda afa-tsy Bangladeshi Taka 40 monja (US Fifty Cents).Tena gaga aho amin'ireny resaka ireny!! Tsy afaka nampiasa laharana hafa angaha i Shakib Khan tao anatin'ilay sarimihetsika tamin'ny fividianana karatra SIM iray vaovao misanda Bangladeshi Taka 40 (US Fifty Cents) monja…?
Voalahatra ho amin'ny 18 Desambra 2017 izao ny fihainoana manaraka ity fitoriana ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/12/110107/
 Shakib Khan,: https://en.wikipedia.org/wiki/Shakib_Khan
 antso an-telefaona: http://www.thedailystar.net/frontpage/hello-shakib-khan-1483597
 November 4, 2017: https://twitter.com/MrDearMyTeacher/status/926628914490773505?ref_src=twsrc%5Etfw
 olana : http://www.straitstimes.com/asia/south-asia/bangladeshi-rickshaw-driver-sues-actor-shakib-khan-over-phone-number-mix-up-in-movie
 November 2, 2017: https://twitter.com/ak_nosib/status/925950901470208000?ref_src=twsrc%5Etfw
 Zahid Newaz Khan: https://www.facebook.com/zahid.n.khan.50/posts/10159717769030650
 Kawsarul Alam Sanjid: https://www.facebook.com/amragaibandhabashi.korttipokkho/posts/883133718519970